UDkt u-Kapil Narain wase-UKZN.
Umfundi Wakudala Wase-UKZN Usebenze kwi-African Union COVID-19 Youth Advocacy Group
UDkt Kapil Narain, owethweswa iziqu zobudokotela e-UKZN ngonyaka wezi-2020, usebenze kwi-African Youth Front on Coronavirus (i-AYFC), umkhankaso we-Office of the Youth Envoy and Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) ye-African Union.
I-AYFC iyithimba lentsha elixubile labalingani abehlukene nezinhlaka zezizukulwane ezehlukene ezihambisana nokulandelwa kwe-African Continental Strategic Plan yobhubhane lwe-COVID-19. Lelithimba lethulwa ukuze likwazi ukunika intsha yase-Afrika ithuba lokuthi iqhamuke nezisombululo eziholwa yintsha nokuthi ibe sekhaleni lokubhekana nobhubhane.
Njengoba lomkhankaso ubunabaholi bentsha base-Afrika yonke, u-Narain umenywe ngenxa yamava akhe nothando lwakhe lwezempilo ezingeni lomhlaba, ubuholi nobushabasheki. Ngaphezu kwalokho wake waba yinxusa le-Federation of African Medical Students Association (i-FAMSA), inhlangano engaphansi kwe- African Union (AU) ne- World Health Organization (WHO), lapho ayenguSihlalo weCOVID-19 Technical Group khona.
U-Narain waba neqhaza ekwenziweni kwemigomo emine eyathunyelwa kwi-Africa CDC, okubalwa kuyona:
1. I-Partnership to Accelerate COVID-19 Tests
2. I-Risk Communication and Social Engagement
3. I-Impact of COVID-19 on Vulnerable Youth
4. I-Mask Wearing and COVID-19 Preventive Practices
U-Narain waphinde waba neqhaza embikweni ongemininingwane ye-How African Youth Access COVID-19 Information eyayisuselwa ocwaningweni olwenziwa emazweni angama-50. Ngenxa yalokho, ngokuba yingxenye ye-AYFC, wabamba iqhaza ekushicilelweni komthethosivivinywa othi Facts and Figures of Africa Youth Agency, Challenges and Recovery Roadmap on COVID-19, ongumphumela wezingxoxo ezehlukene eziqukethe izincomo, ezokwenza izinto ezintsha kwezempilo nezobuchwepheshe, ukudla, uhwebo olukhululekile, usizo lwezempilo lwawo wonke umuntu nokulingana ngokobulili.
‘Kuzona zonke izinselelo kwezokwelapha, kube yinto emnandi ukusebenza kwi-AYFC. Ngemizamo yethu sikwazile ukubhekana nezinselelo zabantu abasha nemiphakathi. Ngenxa yalokho, kwenziwa amaphepha nemibiko yenqubo efinyelela emazweni angamalungu,’ kuphawula u-Narain.
‘I-African Union iyinhlangano yokuqala ehlanganise ohulumeni ukwenza uhlaka lwenqubo esezingeni eliphezulu yabantu abasha ukuthi bahole ngokubambisana ekubhekaneni nobhubhane iCOVID-19,’ kuphawula Inxusa Elikhethekile Lentsha Kwi-AU, uNks Aya Chebbi.
‘Kubaluleke kakhulu ukuthi Amazwe Angamalungu e-African Union abambisane nentsha ekulweni neCOVID-19,’ kusho uKhomishana we-AU uSolwazi Sarah Anyang. ‘Uma kwenziwa lezozinqubo siyacela ukuthi kufakwe intsha kuthi uma kuhlangana umkhakha wezempilo kusetshenziswe amakhono entsha kulezozingxoxo ukuze sonke ngokubambisana sizonqoba iCOVID-19 kucace.
Ngonyaka odlule u-Narain umenywe ukuthi ayoba yisikhulumi emicimbini ehlukene okubalwa kuyona i-World Pre-health Conference 2021 e-Harvard University (obekudingidwa ukungalingani ngomgomo), i-Operation Smile (ebidingida ubushoshovu bentsha), i-Millennium Campus Network e-University of California (ebidingida ezempilo kuwona wonke umuntu), i-FAMSA General Assembly e-Uganda, i-Makers & Movers - Cold Chain 2021 Summit on Global Access and Distribution of Covid-19 Vaccine. Ubambe iqhaza kwi-Africa Health Agenda International Conference kanti usanda kumenywa wungoti wezempilo uDkt Fundile Nyati.
Ngekhono lakhe elikhethekile lokudweba, u-Narain uphose esivivaneni somkhankaso womhlaba wonke i-Project Red Zone njengomunye wamaciko angabafundi angama-35. Lombukiso bekungowe-Russian Academy Of Arts and International Designers Association ukubonga imizamo yabasebenzi bezempilo. Vakashela ku: www.moasd.ru/2020/07/20/participants-red-zone/.
U-Narain, othanda izinto ezithinta ukuhlomisa intsha, nabanye abaholi bentsha bahlele i-African Healthcare Students Symposium (i-AHESS) ehanjelwe yizikhulumi zaphesheya ezingaphezu kwama-20 kanti yenziwa ukufinyelela kalula kuzona zonke izihambeli, yahlomisa abafundi nabasebenzi bezempilo abangama-700 emazweni angaphezu kwama-30.
U-Narain uqeqeshelwa umsebenzi e-King Edward VIII Hospital eThekwini. Ufisa ukugxila kwezokwelapha ngaphakathi noma i-ephidemiyoloji yezifo ezithathelanayo
Owayengumfundi Wakudala Uklonyeliswe Nge-Order of Merit Yase-New Zealand
Isifundiswa Sase-UKZN Sibhale Ngempilo Yesimanje YaseNyuvesi
OweSosiyoloji Uqokelwe i-International Amazing Women Award